Prosas Profanas naRubén Darío | Zvazvino Zvinyorwa
Imwe yeakanyanya kunaka e Ruben Dario Kwakave kuvandudzwa kwemetriki uye kwemazwi kwaakapa nhetembo nekuda kwekuvandudzwa kwake mundima iyi, iyo inonzwika kupfuura zvese mune rimwe rebasa rake, rinova iro rimwe kunze kwe "Profane Prose". Iri bhuku, rakapepetwa uye rakaburitswa kekutanga muBuenos Aires muna 1896, rinomiririra kukunda kwemazuva ano muRubendarian aesthetics pamwe nenguva yayo yehukama.
Izvo zvitsva zvinouya kwatiri kubva kuzita chairo nekuti neshoko rekuti prose rinoreva mamwe mahinino anoimbwa mune mamwe maMisa mushure mekuverengwa kweEvhangeri uye neshoko rekuzvidza rinoramba nemaune izwi rekutanga, nekudaro richibvuma chimwe chinokwezva uye iyo nguva kumwe kurambwa kwakanangana chitendero chinyakare katurike.
Zvemukati mebhuku zvinoramba zvichitiratidza misiyano yakasimba nekuti kana kune rimwe divi ane nzira yepamusoro yekutiza kubva kune chaicho chaasina kufarira, kune rimwe divi inoratidza zvakadzika kunetseka munharaunda, nenzira yakachena yemabasa ake ekutanga. Mumapeji ese anoumba "Prosas profanas" Darío anobvunza zvese zvakamupoteredza, senge hupenyu uye kufa, chitendero chaicho, nhetembo, hunyanzvi ...
Pamusoro pekuvapo kweSpain pane mamwe madingindira akadai seake "Elogio a la Seguidilla" kana mareferenzi ake kuCid, iyo mafaro erotic ndeimwe yemisoro mikuru yebasa umo vakadzi vanoona nezvinhu zvakasiyana zvehunhu: kuchena kwenjiva, kusango kwedindingwe, njodzi yegungwa ...
Pasina kupokana tatarisana nechimwe chekuchinja kwenhetembo dzeSpanish, icho chakashanduka zvachose mushure mekuburitswa kwechinyorwa ichi.
1 Chii chinorehwa naProfane Prosas?
1.1 Izwi iro rinoshandiswa naRubén Darío
2 Ndeipi misoro inobata Prosas Profanas?
3 Ndedzipi nhetembo dzese dzinozvinyora?
Chii chinorehwa naProfane Prosas?
Profane chirevo che Ruben Dario icho chaicho seti yenhetembo yakanyorwa nanyanduri iye uye ayo ane hukama nenyika isinganzwisisike uye inonakidza. Mariri, unogona tsvaga machindakadzi, madzimambo, varwi, fairies, nevamwe vazhinji vengano.
Bhuku rekutanga Prosas profanas rakaburitswa muBuenos Aires muna 1896, asi kwete nemusoro wezita rava kuzivikanwa parizvino, asi se "mazwi ekupedzisira." Pamusoro pezvo, yaingova nenhetembo makumi matatu nematatu dzakaparadzirwa kuburikidza nezvikamu zvinomwe (imwe neimwe iine nhetembo dzinoverengeka dzichipa kudzama kukuru kuchikamu chechipiri).
Zvisinei, munyori haana kugutsikana zvachose, uye muParis, muna 1901, Rubén Darío akaita chinyorwa chechipiri chebhuku rake, achiwedzera nhetembo nhatu zvakare achichinja zita rake. Nhoroondo yemamwe enhetembo idzi inozivikanwa, yakadai seya "Blasón", uyo akanyora chaizvo muMadrid apo zana ramakore reColumbus raipembererwa; kana "Colloquium yemakumi emakore", kwaakaigumisa patafura muLa Nación apo mutori wenhau, Roberto Payró, ainyora chinyorwa.
Ramba uchifunga izvo kuna Rubén Darío bhuku iri nderimwe reakanakisa aanonyora, Kunyanya nekuti panguva iyoyo aive ari pamusoro pebasa rake semudetembi uye zvese zvakabuda mupfungwa dzake zvakabudirira kwazvo. Nekudaro, zvinofungidzirwa kuti zvakanyorwa munguva yemunyori yemaruva. Iye amene anozvitsanangura se "Chitubu Chake Chizere."
Ose maPros profanas naAzul, maviri emabhuku akakurumbira emunyori, anotungamira kuchimiro chemazuva ano chedetembi, uye iwe unogona kuona kuti kune shanduko huru kwazvo maererano nekukwana uye kukura, ndosaka iri yeakanyanya kukosha.
Zvino, zvinorevei kuti Profane Prosas? Zvakanaka, sekureva kwemunyori, yega nhetembo, uye akati wandei pakati pavo, vaive rwiyo, izwi rakanangana nematimu aakabata nawo mubasa rake. Kunyangwe rwaive rudo, hunyanzvi, vakadzi ... Izwi chairo rekuti "Prosas" raitove rakashandiswa muMiddle Ages uye vaigara vachitaura nhetembo yechiLatin yaive mutero kune Vasande. Nekuda kweichi chikonzero, akashandisa iro izwi achiwedzera izwi rekuti "profane" kureva nyaya dzenyika, ndokuti, hupenyu hwezuva nezuva hwevanhu vakajairika.
Izwi iro rinoshandiswa naRubén Darío
Rubén Darío ndomumwe wevanyori vanonyanya kukosha venguva yake. Uye nzira yaakazviratidza nayo yakadaidzira kune chokwadi chekuti aive akanyatso kukura nemazwi. Muchokwadi, kunyangwe ivo dzimwe nguva vangangotadza kuzvinzwisisa, iyo mutoro wekunzwa kuti mazwi ake aive aita nhetembo dzake kuisa muverengi kana muteereri munzvimbo iyoyo yaaida, kukonzera manzwiro, manzwiro, nezvimwe Kuti aite izvi, akanunurawo mazwi akashandiswa, ayo nanhasi haasati ashandiswa, kunyange achizivikanwa. Isu tinotaura, semuenzaniso, nezve "algazara", senge inofara-kuenda-kutenderera kwemazwi; kana "kusundidzira", uchinzwisisa sePush kune chimwe chinhu kana mumwe munhu.
Ndeipi misoro inobata Prosas Profanas?
Basa rose raRubén Darío ibhuku rinotarisa pamisoro yakati wandei mupeni yake, senge vakadzi, rudo, eroticism, hunyanzvi, kunetseka, ngano ...
Paanobata pamusoro penyaya yevakadzi, ese maRubén Darío mavhesi nemafungiro anotarisa pakunamata munhu iyeye, pakunzwa padhuze naye uye achimudana nyoro, akapfava, anotapira rudo. Zvisinei, mune chikamu eroticism, nyanduri anochinja, iye anova chinyakare uye akaisa pfungwa yake panyama kunzwa, kudiwa, venyama chido.
Ehezve, hadzisi nhetembo dzese dzinotarisa pane izvo zvinyorwa, Kune zvakare kunetsekana kwemunhu, kwekufa, zvinoitika kana zvasvika, uye kunyangwe nezve zvakavanzika zvechisikigo.
Nezve ngano mumabasa ake, anoshandisa vatambi vengano senge zvaive kuratidzwa kune izvo zvinonzwa iye munyori, kungave "rudo" kana kungoita kudetemba chiono chenyika sezvaanochiona. Izvo hazvisi chaizvo kuti bhuku rakavakirwa mungano, kana kuti iro rinongotaura ngano muchimiro chedetembo. Muzvokwadi, zvinoitwa nemunyori ndezvekushandisa izvo zvirevo, zvinomisikidzwa nemanzwiro uye zvinomiririra vamwe, munhetembo dzake, zvichiita kuti awane hunhu, kunyatso chenjera uye pamusoro pemaitiro emabasa ake.
Chekupedzisira, nezve dingindira renyika, marongero anoita vanhu kune mumwe nemumwe, nemararamiro, munyori anozvirondedzera, kwaari, kunhetembo yake, nekuti ndicho chinhu chakanyanya kukosha. Muchokwadi, pane shanduko huru muRubén Darío kubvira Anobva pakuva mudetembi asina hanya kuti nhetembo dzake dzine zvikanganiso here kana kuti hadzina kududzirwa nemazvo; kukumbira zvakawanda kubva kwauri uye kutsvaga mumabasa iwayo kugara nekusingaperi.
Ndedzipi nhetembo dzese dzinozvinyora?
Sezvambotaurwa, yekutanga edition ye Prosas profanas uye yechipiri inosiyana zvakanyanya mukubatanidzwa, mune yekupedzisira, nhetembo nhatu nyowani. Nekudaro, avo vanoumba bhuku ndeanotevera:
Profane prose (sechikamu, chine nhetembo dzinotevera):
Yakanga iri mhepo yakapfava ...
Rumbidzai maziso matema aJulia
Colloquium yemazana (sechikamu mukati mawo). Iine nhetembo Colloquium yemakore zana emakumi maviri nemaviri ndima.
Zvinosiyana (sechikamu). Nenhetembo dzinotevera:
Nyanduri anobvunza Stella
Symphony in Grey Major (iyo nhetembo yakare kwazvo yeavo vese vakaunganidzwa).
Verlaine (sechikamu). Nenhetembo:
Kudzokorora kwekuchera matongo (sechikamu). Nenhetembo:
Humambo hwomukati (sechikamu nhetembo).
Zvinhu zveCid (sechikamu uye nhetembo).
Dezires, layes uye nziyo (sechikamu). Nenhetembo:
Rwiyo, Rwurwo rudo harubvume tambo kuratidzwa
Iwo maamphoras eEpicurus (sechikamu). Nenhetembo:
Ida rwiyo rwako ...
Kune vadetembi vanoseka
Kuna Master Gonzalo de Berceo
Ndinodzingirira nzira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » "Prosas profanas" iyo itsva naRubén Darío
Ana Jacqueline akadaro
Zvinotaridza kwandiri mushe mushe mushe kuisa ruzivo rwacho kana rwusingawanikwe chete pafacebook, usarubuditse kana rusipo
Pindura Ana Jacqueline
Chokwadi Ana, Aya mabharaki…. hazvina maturo ...
Zita rerosi uye Usataure nevasingazive. TV dzino